Xanibaadii dhuumaha ugxanta
aad halkan: Home uurka Xanibaadii dhuumaha ugxanta
Qiyaastii mid ka mid ah afar xaaladood oo dhalmo la'aan dumar ah waxaa sabab u ah xirmidda oo ka mid ah dhuumaha ugxanta. Waa in ka labka iyo dhuumaha ugxanta, maxaa yeelay, iyagu ukunta ee ugxan helay, iyo in ay dhex gasho shahwada. saygoot, la aasaasay ka dib markii ay ku biirto ee unugyada jinsiga lab iyo dhaddig, degaa galay saabka minka, iyo meesha ay ku dhegganaa derbiga. Waayo, nolosha haweenka la cudurada this, guud ahaan, hanjabaad ma jiraan, laakiin helida caqabadaha gudaha dhuumaha faloobiyanka (xataa sida kordhin sitemapSii uurka leh) hor joogsan kara geeddi-socodka fikrad caadi ahaan dhacaan.
sababaha xirma ee dhuumaha ugxanta more:
geeddi socodka neoplastic Baarrii iyo malignant in dhuumaha ugxanta ah.
Cawaaqibta sameeyay ilmo iska soo ridid ​​caafimaad iyo qaliin on xubnaha caloosha.
guuldarro oo ka mid ah xubnaha taranka qaaxada.
cillado lagu dhasho ee qaab-dhismeedka dhuumaha ugxanta.
cudurada faafa ee nidaamka taranka.
cillad ee nidaamka hormoonnada.
Xanibaadii dhuumaha ugxanta: calaamadaha.
Inta badan cudurada this ayaa stёrtuyu halkii caafimaad. Xanibaadii dhuumaha ugxanta, calaamadaha, taas oo aan si cad loo muujiyay, iyo sidoo kale Maqnaanshaha of caadada ee aan uurka, Waxa uu bilaabaa inuu rabshin naagta sida caadiga ah waa kaliya ka dib markii tiro ka mid ah isku day lagu guulaysan in aad uur. mararka qaarkood waxaa jira oo kaliya calaamooyinkan oo kale u, sida xanuun soo noqnoqday ee caloosha hoose, isagoo qof ah ay barbaro galeen. Waxa kale oo aad la kulmi karaan xanuun caadada, dheecaan jaalle ah badan, oo waa ka gooni ah xanuun iyo xanuun inta lagu jiro galmada.
Ka dib markii ururinta dhamaystiran calaamadaha, bilaabin hannaanka cudurka si loo xaqiijiyo cudurka. hababka aasaasiga ah ee go'aan ka soo baxay xirma oo ka mid ah dhuumaha ugxanta:
Habka gidrolaparoskopicheskiй Transvaginalьnый.
Daaweynta xirma oo ka mid ah dhuumaha ugxanta.
Daaweynta xirma oo ka mid ah dhuumaha ugxanta inta badan ku xirnaan doontaa inta ay le'eg socda cudurada this, sababaha kuwaas oo iyada ka dhigay iyo qof ee calaamadaha. Xaaladaha qaarkood, waa ku filan tahay in ay caadi hormoonnada iyo baabi'iyo stress xad-dhaaf ah. In cuduro bararka muujinaysaa daawooyin lid ku ah bakteeriyada, daaweynta dabiiciga ah, iyo mararka qaarkood qalliin. Si kastaba ha ahaatee, muuqaalka kore ee looga shakisan yahay xirma ugu horeysay galka ah waa in isla markiiba raadsatid la-talin caafimaad.